‘भाँडा माझ्न पलायन भएको’ नेपाली उद्यम – SatyaPatrika
‘भाँडा माझ्न पलायन भएको’ नेपाली उद्यम
डिसेम्बर ३०, २०२० को दिन ग्लोबल नेवा कन्फरेन्समा ‘यल’ज इभोलुसन थ्रु कुनु शर्मा’ज कीर्तिपताका’ शीर्षककाे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने मौका मिल्यो । हामीले अहिले देखेको पाटन श्रीनिवास मल्लको पालादेखि आजको मितिसम्म आइपुग्दा कति रह्यो ?
आफ्नो किशोरावस्था क्यानाडामा बिताएको हाम्रो छोराले स्वारीले लपेटिएको जेरीको पहिलो ‘ बाइट’ सँग भन्यो – यसमा त पाटनको स्वाद छ ।
तीमध्ये महिलाको ब्युटी पार्लरवाला सीप रहेछ । कपाल काट्ने पेसामा नेपालीको हात चलिसकेको थिएन । मलाई सम्झना छ – उनीहरूको घर नै पुगेका छौँ हामी कपाल काट्न । त्यसभन्दा अघि एकाध पटक घरमै इमानदार प्रयास गरियो, राम्रो भएन । हामी त्यसैले कि सैलुन जान बाध्य थियौँ कि त एक चिनियाँ महिलाकोमा ।
एडमन्टनपछि सन् २०१२ को सुरुका महिनामा नै क्यालगेरी सरियो कामको सिलसिलामा । करिब अढाइ वर्षको बसाइ रह्यो त्यहाँ । अपेक्षाकृत ठूलो सहर, विभिन्न पेसाजीवी नेपाली त्यहाँ थिए । तीमध्ये दुई जनाको उद्यमशीलताको चर्चा गर्दैछु । एक थिइन् – डाक्टर रेखा पराजुली ।
त्यस्तै अर्का व्यक्ति हुन् – क्यालगेरीका अर्जुन गैरे । अर्जुन जति नम्र, भद्र र सुशील मान्छे बिरलै भेटेको छु मैले । उनी एक कुशल व्यवस्थापक हुन् र हालको क्यालगेरीको नेपाली रेस्टुराँ साम्राज्यको भुल्न नसकिने व्यक्ति हुन् । हेर्दाहेर्दै उनको नेतृत्वका घटीमा ५ वटा नेपाली/ इन्डियन रेस्टुराँ संचालनमा छन् अहिले क्यल्गेरिमा । निश्चय नै अर्जुन त परिआए जुठो भाँडा पनि माझ्दा हुन् तर उनी त्यो र त्यसो गर्न क्यानाडा आएका थिएनन् ।
मेरो भनाइ मात्रैले त के हुँदो हो तथापि केहि समयपछि घर किने र भुइँतलामा सेन्टर चलाए । अझै त्यो उद्यमबाट विमुख भएका छैनन् होला । अर्जुन भने अब इङ्ग्लिस टिचर पनि भएछन् र विश्वविद्यालयतिर पनि पढाउन थालेछन् । अर्जुन पनि नेपाली समाजले भनेझैँ क्यानाडामा विदेशीको जुठो भाँडा माझेर बसेको छैनन् । रिजाइनामा नै एक नेपाली मारवाडी भाइ पनि छन् – अनुप घिराइया ।
अनुप आफू त उद्यमी भए नै अरूलाई रोजगारी पनि दिइरहेछन् । एउटा पसल चलाउछन् –‘स्पाइस बजार’ नाममा । रिजाइनामै केही संगतभित्रकै भाइहरुले जाँगर गरेर थोरबहुत लगानीमा ‘लुम्बिनी इन्टरटेन्मेन्ट’ भन्ने कम्पनी दर्ता गरे र केही नेपाली चलचित्र ल्याएर देखाए पनि ।
अर्जुन अधिकारी, सुमन भण्डारी, विनोद हुमागाईं, उद्धव ठगुन्ना, पिताम्बर भण्डारी आदि उनीहरू आफ्नो पेशागत दक्षता अनुरुपको काम त गर्छन् नै उद्यमशीलतामा पनि पछि परेका छैनन् । करिब अढाइ वर्ष भयो रिजाइना छोडेको पनि । अलिअघि अवकास लिएकी मेरी एक जना सहकर्मी भन्दै थिइन् – रिजाइनामा खुलेको नयाँ नेपाली रेस्टुराँमा तिम्रो घरमा खाएको जस्तो स्वादको मम खाएँ मैले ।
अनिता पनि हाम्रो शास्त्रीय परिभाषानुरूपको भाँडा मझाइमा छैनन् । पेसाजन्य उद्यम नै गरिरहेकी छिन् । भागम्भागको जीवनमा उनैले फोन गर्छिन् र भन्छिन्- सर, म्यामको वार्षिक चेकपको समय भयो है ? कहिले आउने हो, निधो गरौँ । हो, यो उनको पेसा हो, त्यसबापत उनले दानापानी कमाउँछिन । जे होस्, पेसागत मान्यता, दक्षता र क्षमताका कारणमात्र नभई भाषिक सहजताका कारण पनि हामी अनिता गुप्ताका सेवाग्राही बनेका छौँ । एकप्रकारको सन्तुष्टि छ – कसैको सेवा लिनैपर्थ्यो, नेपालीकै सेवा लिने सुअवसर पाएका छौँ ।
मैले उल्लेख नगरे अन्याय हुने अर्का पात्र हुन् – पूर्वी टोरोन्टोका अटोमेकानिक राजकुमार गुरुङ । राजकुमार जीलाई भेटेपछि पूरै मेरो पैतृक थलो गण्डकीको मगमग बासना आउँछ । राजकुमार आफैँले गाडी मर्मतको एउटा ग्यारेज चलाएका छन् । गाडीको नियमित जाँच र मर्मत गर्छन् ।
हरेक वसन्त र पतझर मौसम सुरु भएपछि उनैले सम्झेर फोन गर्छन् र भन्छन् – गाडीको टायर चेन्ज गर्ने बेला भो, कहिले आउनुहुन्छ ? क्यानडामा यी दुइ सिजनमा मौसम अनुरुपको ट्युनिक भने झैँ माैसमअनुरुपको टायर हाल्नु पर्छ । नत्र हिउँदमा गाडी चिप्लेर दुर्घटना हुनसक्छ ।
‘ मैले त केही जानेको छैन’ भनीभनी यी बूढाले आफूलाई ठूलो रोजगारदाता बनाइसके । पछिल्लो समय नेपाली स्वादको इन्डियन रेस्टुराँमा समेत जमेका छन् रे भन्ने सुनिन्छ ।
कोपुन्डोलबाट आँबुखैरेनी गए झैँ छ मेरो जागिर खान जाने ठाउँ अचेल टोरोन्टो एरियामा । दिनको एकतर्फी ११७ किलाेमीटर ड्राइभ गरेर काममा पुग्छु । बिल्कुल नयाँ सहर हो त्यो मेरो लागि । गएको साता सहकर्मीले सोधे – यस सहरमा नेपाली खाना पाइन्छ ? प्रश्नले पहिले त हक्क न बक्क भएँ ।
पछि सोचेँ – गुगललाई ‘ हक्का ‘भनेर सोधेँ भने त पक्का थाहा हुन्छ । साँच्चै नै, एभरेस्ट नाम गरेका दुईवटा रेस्टुराँ रहेछन् त्यहाँ । मेनु हेर्दा जुनमा मम देखेँ, त्यसैमा फोन गरेँ र पहिलो प्रश्न सोधेँ – नेपालीमा अर्डर गर्न पाइन्छ? यो यस अर्थमा जरुरी थियो कि गोरालाई पिरो पनि स्पाइसी हुन्छ मसालेदार पनि स्पाइसी ।
उताबाट फोन उठाउने भाइले भने – भन्नुस् न सर, हामी त नेपाली नै हौँ । मैले अर्डर अर्थ्याएँ । मसलेदार त होस् पिरो भने नहोस् है ? सर, अलिअलि पिरो त सबै हुन्छ, हजुरलाई माइल्ड वाला गर्दिऊँ ? तोकिएको समयमा एभरेस्ट हक्कामा पुगेपछि उही हाम्रो स्निग्ध, निश्छल र कर्तव्यपरायण हाँसोले नमस्कार गर्‍याे र भन्यो – हजुरको अर्डर रेडी छ ।
भ्यालेन्टाइन डेको बिहानै ‘ दाजु भाउजुलाई प्रणय दिवसको शुभकामना’ भन्दै फोनै गरे पंजीकृत खजाञ्ची ( चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट) शरद पौडेलले । उनी हाम्रा एकाउन्टेन्ट हुन् । सालाना हामीले गरेको आम्दानीका आधारमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर वा राज्यले हामीलाई फिर्ता दिनुपर्ने करकट्टाको रकमको हरहिसाब उनैले गरिदिन्छन् । यो हिसाबकिताब गर्ने एउटा विधि, पद्धति छ । आफैँ पनि गर्न सकिन्छ भन्छन् जान्नेहरु ।
यी आए, आफ्नो पेसागत भुइँ खोस्रे, मीठो फल फलाए । यिनका सेवा लिन पाउँदा म आफू त पुलकित छु भने यी आफैं कति खुसी होलान् ? क्यानाडाको चार सहरमा बसेको र तिनै सहरको सामुदायिक नेतृत्वमा बसेको आधारमा लेख्दैछु – विदेशीको जुठो भाँडा माझेरभन्दा आफ्नो कर्म गरेर स्वतन्त्र र स्वाभिमानी जीवन बाँची रहेका छन् नेपाली क्यानाडामा ।
उनीहरुको अर्को कुनै सेवाग्राहीसँगको निजी सम्बन्ध र अनुभव मेरोभन्दा पृथक हुनसक्छ । खुसी लाग्छ – हामी वास्तवमा यस्तो नेपाली भनेर यता चिनिदै छौँ । नेपालबाट पनि त्यसरी नै चिनिने दिन आउनेछ भन्ने विश्वास त लिन पाइयो नि ! कि कसो ? – बाह्रखरी
भारतीय सेनासँगको झडपमा आफ्ना चार सैनिक मारिएको चीनको खुलाशा
भागरथी भट्टको मृत्यु भएको १७ औं दिनमा दाहसंस्कार गरिदै